ब्राजिलका राष्ट्रपति बोलसोनारो कोरोना संक्रमणबाट मुक्त - नागरिक रैबार
ब्राजिलका राष्ट्रपति बोलसोनारो कोरोना संक्रमणबाट मुक्त
काठमाडौँ – ब्राजिलका राष्ट्रपति जायर बोलसोनारोले कोरोना संक्रमणमुक्त भएका छन् ।पछिल्लो परीक्षण रिपोर्ट नेगेटिभ आएसँगै उनी संक्रमणमुक्त भएका हुन् । उनले ट्वीट गर्दै आफ्नो रिपोर्ट नेगेटिभ आएको बताएका हुन्। यसअघि उनमा दुई पटकसम्म कोरोना परीक्षण रिपोर्ट पोजेटिभ आएको थियो।
बोलसोनारोले कोरोना भाइरसलाई सामान्य फ्लू भन्दै आएका छन्। विश्वमा अमेरिकापछि ब्राजिलमा सबैभन्दा धेरै कोरोना संक्रमित छन्। ब्राजिलमा हालसम्म २३ लाखभन्दा बढी संक्रमित छन् भने ८६ हजार भन्दा धेरैको मृत्यु भएको छ।
जाजरकोटका एकल महिलालाई सोलार वितरण
साम्राज्ञीविरुद्ध भुवनले दिए अदालतमा उजुरी
काठमाडौं, ८ असोज । मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार देशभर सामान्य देखि पूर्ण बदली रही धेरै स्थानहरुमा हल्का देखि मध्यम वर्षा भईरहेको जनाएको छ । विभागले प्रदेश नं १, प्रदेश नं २, बागमती प्रदेश, गण्डकी प्रदेश, प्रदेश नं ५ र कर्णाली प्रदेशका १-२ स्थानहरुमा अति भारी वर्षा भैरहेको जनाएको छ । विभागका अनुसार देशभर सामान्य देखि […]
नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी (नेकपा) कास्कीका अध्यक्ष एवम् गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य कृष्ण थापाले दुई वर्षभित्र बृद्धभत्ता रु पाँच हजार पुग्ने बताएका छन् । पोखरा महानगरपालिका वडा नं १७ सितापाईलास्थित पोखरा बृद्धाश्रमको २४ औं वार्षिक साधारणसभा तथा विशेष अधिवेशनको बुधबार यहाँ उद्घाटन गर्दै उनले सरकारले जेष्ठ नागरिकलाई सार्वजनिक यातायात सुविधासहित निःशुल्क स्वास्थ्य उपचारको नीति लिएको बताए । […]
बाजुरा–बाजुराको खप्तड छेडेदह गाँउपालिका २ बस्ने ६० बर्षिय दुरपति सार्कीको परिवारले नागरिकता नपाँउदा सरकारी सेवा लगायत सेवाबाट बञ्चित भएका छन् । दुरपतिको पनि नागरिकता बनेको छैन् भने उनका २५ बर्षकी छोरी मना सार्की र २० बर्षका छोरा तेज सार्कीले समेत नागरिकता पाउँन सकेका छैनन् । दुरपतिको बृद्धभत्ता पाँउने उमेर भइसकेको छ, भने उनका छोरा तेज […]
सावधान, धेरै केरा खानु हानिकारक !
विश्वको प्रायः सबै ठाउँमा पाइने फल हो, केरा । साधरणतया सुरूमा हरियो भएपनि केरा पाकेपछि पहेंलो, वैजनी र रातो रंगको हुने गर्दछ । यसको सेवनले शरीरमा विभिन्न फाइदाहरु प्राप्त हुने गर्दछ । तर सबै बेला केरोको सेवन लाभदायी नहुनसक्छ । एकैचोटि धेरै केरा खाँदा स्वास्थ्यमा गम्भिर असर पर्ने गर्दछ । दैनिक ६ भन्दा बढी केराको […]
सुदूरपश्चिममा झण्डै ७९ हजारको कोरोना परीक्षण
धनगढी– सुदूरपश्चिम प्रदेशमा झण्डै ७९ हजारको कोरोना परीक्षण गरिएको छ। प्रदेशका ९ वटै जिल्लाबाट संकलन गरिएका ७८ हजार ६ सय ८८ जनाको स्वाब परीक्षण गरिएको स्वास्थ्य निर्देशनालय डोटीले जनाएको छ। धनगढी प्रयोगशाला मार्फत ४१ हजार ८ सय १६, राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला र प्रदेश बाहिरका अन्य प्रयोगशाला मार्फत १६ हजार तीन सय १८, डडेल्धुरा अस्पतालको प्रयोगशाला […]
सिलाई कटाई व्यवसायमा महिलाको सक्रियता बढ्दै
सातामा दुई दिन सार्वजनिक बिदा दिने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा जाने
देशभर बाढी-पहिरोको ‘बितण्डा’: १४ को मृत्यु, ७ बेपत्ता !
स्थानीय लेखकहरुको क्षमता अभिबृदि कार्यशाला सम्पन्न
मालिकामा विद्यार्थीको चाप बढेपछि तीन सिप्टमा पढाई संचालन हुँदै
अंशु फाटी बार्सिलोनाको सिनियर टिममा बढुवा, ४०० मिलियन युरो रिलिज क्लब
करीव दुई महिना पछि कोल्टी डिपोमा खाद्यान्न पुग्यो